သေမင်းမသေဘဲ AceStream ကို Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း Linux မှ
အားကစားကိုနှစ်သက်ပြီးလက်ရှိအားကစားလိုင်းများအားလုံးမသုံးနိုင်သူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပျော်ရွင်ဖွယ်ရာပြfaceနာနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လွှင့်သောစာမျက်နှာအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုရမည်။ အွန်လိုင်းပွဲများအများစုကတောင်းဆိုကြသည် AceStream ကို install လုပ်ပါLinux သည် install လုပ်ရန်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။
ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာငါတို့ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲ AceStream ကို Linux ပေါ်မှာ install လုပ်ပါ ဒီကြိုးပမ်းမှုမှာသေစရာမလိုဘဲ၊ ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သောအကြောင်းအရာသည်သင်၏လုံးဝတာဝန်ဖြစ်သည်။
1 AceStream ဆိုတာဘာလဲ။
2 Linux ပေါ်မှာ AceStream ကိုဘယ်လို install မလဲ
2.1 Arch Linux နှင့်သူမှဆင်းသက်လာသူများအတွက် AceStream ကို Install လုပ်ပါ
2.2 AceStream ကို Ubuntu နဲ့ derivatives တွေမှာ install လုပ်ပါ
2.2.1 AceStream ကို Ubuntu 14.04 ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်ပါ
2.2.2 AceStream ကို Ubuntu 16.04 ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်ပါ
AceStream တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မာလ်တီမီဒီယာပလက်ဖောင်း အတော်လေးဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ အင်တာနက်ပေါ်မှအသံဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအဆင့်မြင့်သို့ယူဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ဤသို့ပြုရန်၎င်းသည် multimedia ဖိုင်များတင်ရန်အတွက် Universal Manager တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အဆင့်မြင့် P2P နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ ထိရောက်သောအချက်အလက်သိုလှောင်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအာမခံသည်။
Ace Stream ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးထားသည်။
အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်အွန်လိုင်းရုပ်သံလွှင့်ခြင်း (တီဗီ၊ စိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်များ၊ ရုပ်ရှင်၊ ကာတွန်းများစသဖြင့်) ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
အွန်လိုင်း torrent များကိုကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည်အပြည့်အဝဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စောင့်နေရန်မလိုအပ်ပါ။
AirPlay, Google Cast နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေး protocol များမှဝေးလံသောကိရိယာများ (Apple TV, Chromecast, စသည်တို့) တွင်အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပါ။
အမျိုးမျိုးသော application များနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
Linux ပေါ်မှာ AceStream ကိုဘယ်လို install မလဲ
AceStream ကို Linux တွင် install လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော distro ပေါ် မူတည်၍ အဆင့်အမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ Arch Linux နှင့် Ubuntu ကိုသာအာရုံစိုက်မည်ဖြစ်သော်လည်းနောင်တွင်၎င်းကိုအခြား distros များတွင်တပ်ဆင်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Arch Linux နှင့်သူမှဆင်းသက်လာသူများအတွက် AceStream ကို Install လုပ်ပါ
ငါဒီဆောင်းပါးကိုရေးသားရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာများစွာသောသူတို့သည် AceStream ကို Arch Linux, Antergos, Manjaros နှင့် derivatives များတွင် install လုပ်ရန်အခက်အခဲရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ plugin ၏ pkgbuild ကြောင့်ဖြစ်သည် acestream-mozilla-plugin ကို install လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်အမှားတစ်ခုပေးသည်။ ဖြေရှင်းနည်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ကျနော်တို့ကို install သွားကြသည် acestream-mozilla-plugin ကို အရာလည်းကျွန်တော်တို့ကို install ပါလိမ့်မယ် acestream- အင်ဂျင် y acestream- ကစားသမား - ဒေတာ မျိုးပွားရန်လိုအပ်သည့် packages များဘာတွေလဲ Firefox မှ AceStream.
ပထမဆုံးအနေနဲ့ terminal ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါ command ကိုလုပ်ရမယ်။
၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောမှီခိုမှုကိုတပ်ဆင်ခြင်းကိုတားဆီးသောစစ်ဆေးခြင်းပြproblemနာကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည် acestream-mozilla-plugin ကို။
ပြီးရင်အောက်က command ကို execute လုပ်လိုက်ပါ
AceStream ကို Ubuntu နဲ့ derivatives တွေမှာ install လုပ်ပါ
AceStream ကို Ubuntu 14.04 ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်ပါ
Ubuntu အသုံးပြုသူများနှင့် derivative ဗားရှင်း 14.04 အထိသုံးစွဲသူများအတွက် AceStream တပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီး terminal မှအောက်ပါ command များကိုသာလုပ်ဆောင်ရမည်။
ပဲ့တင်သံ 'deb http://repo.acestream.org/ubuntu/ trusty main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/acestream.list sudo wget -O - http://repo.acestream.org/keys/acestream.public.key | sudo apt-key add - sudo apt-get update sudo apt-get install acestream-full
AceStream ကို Ubuntu 16.04 ပေါ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီး install လုပ်ပါ
နည်းနည်းထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ရ ဦး မည်မှာ acestream သည်ဤဗားရှင်းအတွက်အထောက်အပံ့မပေးထားသောကြောင့် Ubuntu 16.04 နှင့်ဆင်းသက်လာသူများ၏အသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါး, ငါက install နိုင်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကသင်တရားဝင် repositories မှသင် download လုပ်၍ မရနိုင်သောမှီခိုမှုများကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ distro ၏ဗိသုကာအတွက်သင့်တော်သောအရာများကို install လုပ်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_amd64.deb သင်ကအောက်ပါ link ကိုကနေလုပ်နိုင်ပါတယ်: http://launchpadlibrarian.net/216005292/libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_amd64.deb
အောက်ပါမှီခိုမှုများကိုတင်ပြသည့်အစီအစဉ်တွင်ကူးယူပါ။ acestream-player-compat_3.0.2-1.1_amd64.deb; acestream-engine_3.0.3-0.2_amd64.deb; acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb; acestream-player_3.0.2-1.1_amd64.deb တစ်ခုချင်းစီကိုအောက်ပါလင့်ခ်မှကူးယူနိုင်သည်။ https://drive.google.com/folderview?id= … e_web#list
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_i386.deb သင်ကအောက်ပါ link ကိုကနေလုပ်နိုင်ပါတယ်: http://launchpadlibrarian.net/216005191/libgnutls-deb0-28_3.3.15-5ubuntu2_i386.deb
အောက်ပါမှီခိုမှုများကိုတင်ပြသည့်အစီအစဉ်တွင်ကူးယူပါ။ acestream-player-compat_3.0.2-1.1_i386.deb; acestream-engine_3.0.3-0.2_i386.deb; acestream-player-data_3.0.2-1.1_i386.deb; acestream-player_3.0.2-1.1_i386.deb တစ်ခုချင်းစီကိုအောက်ပါလင့်ခ်မှကူးယူနိုင်သည်။ https://drive.google.com/folderview?id= … e_web#list
ပြီးရင်တော့ version 14.04 ကိုလုပ်သလိုပဲ AceStream ကိုပုံမှန် install လုပ်ပြီး terminal ကိုဖွင့်ပြီး execute ကိုလုပ်ရမယ်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ဝန်ဆောင်မှုစတင်ရန်လိုအပ်သည် acestream-engine.service၊ ဤအတွက် terminal မှအောက်ပါ command များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။
acestream-engine.service ကိုစတင်သည် systemctl acestream-engine.service ကိုဖွင့်သည်
ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အတူ P2P နည်းပညာရဲ့စွမ်းရည်အားလုံးကိုအသုံးပြုတဲ့ဒီမာလ်တီမီဒီယာထုတ်လွှင့်မှုပရိုတိုကောကိုသင်ပျော်မွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » AceStream ကို Linux မှာဘယ်လိုသွင်းရမယ်၊
Julio Cesar Campos ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပါပြီ။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံး archlinux ပါ။ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်တော့လိုအပ်ပါတယ်။ systemctl start acestream-engine.service နှင့် systemctl enable acestream-engine.service သည်၎င်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Julio Cesar Campos အားစာပြန်ပါ
၎င်းကို firefox မှစမ်းသပ်နေသလားသို့မဟုတ်အခြား browser တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေသလား။
Debian9မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမလဲ။
Archlinux ပေါ်ရှိ Firefox
ကျွန်ုပ်၏ယခင်ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဝေသည်မဟုတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ Terminal မှာ damn command ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာအလုပ်လုပ်သလဲမသိဘူး၊ နောက်ပြီးတော့ –noconfirm ထားလိုက်ပြီးအဆုံးမှာတော့အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။
"Systemctl acestream-engine.service ကိုစတင်ပါ" နှင့် "systemctl ကို acestream-engine.service ကို enable"
ငါမဆိုပြproblemနာမရှိဘဲအဆင့်အားလုံးကိုလုပ်ဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ Terminal ကနေ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါကျရှုံးတာနှစ်ခုရှိတယ်။
acestream-engine.service ကိုစတင်ရန်မအောင်မြင်ပါ။ ယူနစ် acestream-engine.service မတွေ့ပါ။
acestream-engine.service ကို systemctl enable
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမအောင်မြင်ပါ - ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်မရှိပါ
ငါနဲ့ထပ်တူအတူတူပါပဲ terminal ကိုသူတို့အားမအောင်မြင်မှုများနှင့်အတူငါ့ထံသို့သူတို့အားပညတ်တော်မူ၏။
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ubuntu 16.10 64 bits ကိုသင်အသုံးပြုပါက "acestream-player-data_3.0.2-1.1_amd64.deb" ကို install လုပ်၍ မရပါ။ သူတို့ကဒီ package တွေကိုပထမဆုံး download လုပ်ပြီး install လုပ်ရမယ်။
Juan M ကိုပြန်ပြောပါ
Acestream-mozilla-plugin သည်အခြား NPAPI plugins များကဲ့သို့ Firefox 52 တွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
နောက်ထပ်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ docker ကိုသုံးပြီးသင်၏ operating system ကိုမသိတတ်သူဖြစ်သည်။ aceproxy ကိုသုံးပြီးသင်မျိုးပွားနိုင်သည်။
ငါသေဒဏ်ပေးလွယ်ကူချောမွေ့ရန်, သေးငယ်တဲ့သင်ခန်းစာနှင့် script ကိုရေးသားခဲ့သည်။
Ubuntu 16.04 မှ၎င်းကိုထည့်သွင်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတွင်ထိုဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းသည်ဟုပြောသောအခါ၎င်းတို့ကိုမည်သို့တပ်ဆင်မည်နည်း။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်ဆွဲချယူထုတ်ယူသောအခါအချို့မှာ libreoffice ဖိုင်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးအခြားသူများကမူ၎င်းတို့မည်သို့“ ထည့်သွင်းရမည်” ကိုမသိပါ။
သော့များသည်နောက်တဖန်အလုပ်မလုပ်ပါကသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများရှိနေပါသည်။ သို့သော် Arch နှင့် manjaro တွင်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
မှီခိုမှု (qwebquit) သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းသောအခါ၎င်းသည်ကွင်းဆက်ထဲသို့သွားပြီးလမ်းမရှိတော့ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ Arch linux ကိုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရမည် -
- 'yaourt -S acestream-launcher' ဖြင့် yaourt မှ 'acestream-launcher' အထုပ်ကိုထည့်ပါ (နောက်လာမည့် enable လုပ်မည့် package ကိုသင့်ထံအလိုအလျောက် download လုပ်ပါသည်)
acestream-engine.service ကိုဖွင့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် terminal ထဲသို့ဝင်ပြီး ROOT mode တွင်အောက်ပါတို့ကိုထည့်ပါ
-systemctl acestream-engine.service ကိုစတင်ပါ
-systemctl acestream-engine.service ကို enable
ကွန်ပြူတာပြန်ဖွင့်ပြီး၊ လိုအပ်ရင်ဖြစ်မယ်၊ မသိရင်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်တယ်
- ၎င်းသည်လုံလောက်သင့်သည်။ သို့သော်နောက်ဆုံး Arch မွမ်းမံမှုများတွင်၎င်းတို့သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုမှားယွင်းစွာပြုပြင်ပြီးအလုပ်မလုပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဖိုင်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ယာယီဖြေရှင်းချက်ကိုရှာကြသည်။
အရင်းအမြစ်: https://aur.archlinux.org/packages/acestream-launcher/ (မှတ်ချက်များအပေါ်)
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးတာနဲ့၊ ကျနော်တို့ terminal ကိုသွားပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွဲကိုသွားတယ်။
၎င်းကို 'sudo pacman -U python2-m2crypto-0.23.0-2-x86_64.pkg.tar.xz' ဖြင့်ဆက်လက်ထည့်သွင်းပါမယ်၊ ဒါကြောင့်သွားသင့်ပါတယ်၊ ပထမဆုံးအကြိမ်မသွားဘူး၊ ဒုတိယအကြိမ်နှိပ်တယ်၊ အမြဲတမ်းပထမဆုံးအကြိမ် အမှားပေးတယ်၊
PS: sudo pacman -U မဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းပါ။ ၎င်းသည် makepkg မှရရှိသော local package ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ခြင်းကြောင့် yaourt နှင့်ထည့်သွင်းသောအခါ packets များ၏မှီခိုမှုများနှင့်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်သည်။ ငါက Launcher နဲ့မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုလိုက်နာမယ်။ ငါကံကောင်းရင်ငါကြည့်မယ်။ ငါမင်းကိုပြောပြမယ်
တစ်နည်းနည်းနဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး သင်မှတ်ချက်များထဲတွင်သင်ထည့်ထားသောလင့်ခ်ကိုကြိုးစားကြည့်ခဲ့ပါသော်လည်း၎င်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် link ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ၎င်းသည်ငါ့ကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ acestream-launcher ကိုကျွန်ုပ်ရွေးသော်လည်း VLC ကမဖွင့်ပါ။
ဖိုင်« /usr/lib/python3.6/site-packages/psutil/init_send_signal ရှိ .py »လိုင်း 1231
အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းပြီးနောက်၊ console မှအဖြေမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
2017-07-28 18: 16: 59,615 | MainThread | acestream | startup ကာလအတွင်းအမှား
အတွက်« core.c », လိုင်း 1590, ဖိုင်
အတွက်« core.c », လိုင်း 144, ဖိုင်
အတွက်« core.c », လိုင်း 2, ဖိုင်
ImportError - __m2crypto အမည်ကိုတင်သွင်းလို့မရဘူး
ငါတို့တိုးတက်လာပြီ၊ အခု acestream ကိုအသိအမှတ်ပြုလိုက်ပြီ၊ ဒါပေမယ့် libcrypto ကဆက်ပြီးတိုက်နေတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုစလှေတျတျော link ကိုအတွက်သင်အကြံပြုသောအထုပ်ကို install ကြိုးစားခဲ့ပါပြီ။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ပြtheနာကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်ပြီး vlc ကိုဖွင့်ပြီး Acestream အလုပ်လုပ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ နှောင့်နှေးခြင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါ၊ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်သောအခါသင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခြင်းမှာအလွန်ထူးဆန်းပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Arch plasma တွင်ပါ ၀ င်ပါသည်။
ငါရှိသည့်အခြားဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုတွင် Fedora ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည်မှာ ၀ င်းဒိုး xD အတွက်ဝိုင် emulating acestream ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြား distro သို့ Arch သို့သွားလျှင်၊ ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အချက်မှာ Debian တွင်ပင်ထိုအစုများရှိသည်။
ခဲဖွယ်စားဖွယ် maker01 ဟုသူကပြောသည်
မနေ့ကငါက Kde Neon 5.8 မှာ snap package တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းလိုက်တယ်။ အဲဒါကကျွန်တော့်အတွက်ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းပြီးမြန်တယ်ဆိုတာအံ့သြမိတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆောင်းပါးကိုအသစ်ပြောင်းလျှင်နှိုင်းယှဉ်ချက်မရှိသောကြောင့်၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည်များစွာရိုးရှင်းပါသည်။
sudo apt install snapd → Snap package စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို install လုပ်ပါ။
snap find acestream →ကျွန်ုပ်တို့တွင် repositories တွင် program ရှိကြောင်းစစ်ဆေးရန် (ubuntu အနကျအဓိပ်ပါယျအားလုံးရှိသင့်သည်)
sudo Snap acestreamplayer ထည့်သွင်းပါ
အန်တိုနီယို Manzano ဟုသူကပြောသည်
သင်မှန်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာပေါ်လာတဲ့နည်းလမ်းကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် kubuntu 17.10 မှာကျွန်တော် install လုပ်လိုက်တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
antonio manzano အားပြန်ကြားပါ
၎င်းသည် Lubuntu 16.04.4 တွင်၎င်းကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက် configuration file ကိုသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်အတွက်နည်းလမ်းမရှိပါ။ Serviio နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် parameter ကို configure လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဲဒါကို fix ဖို့မဆိုစိတ်ကူးများ?
အလွန်ကောင်းတဲ့ပို့စ်။ Linux newbies အတွက်ဖတ်ရမယ့်ဝဘ်စာမျက်နှာ။
အဲဒါကို AntiX 16 (linux distribution) အတွက်ဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။
ငါ Arch Linux နဲ့အနကျအဓိပ်ပါယျလိုမျိုးကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာအမှားမှားရမယ်လိုလူသစ်တစ်ယောက်ပါ
rookie peter အားပြန်ပြောပါ
အထက်ပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှတ်ချက်တစ်ခုတွင်မှတ်ချက်ပေးသည့် sna packages များနှင့်အတူမင်္ဂလာပါ။ ဤဖြန့်ဝေမှုများအတွက်သာမကလူအများအတွက်ပါပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ဤအစုများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဖြန့်ဝေမှုများသည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
Debian တွင်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည် -
-sudo apt install လုပ်ပါ
-sudo snap ကို core ကို install လုပ်ပါ
acestreamplayer ကို install လုပ်ပါ
-sudo pacman -S snapd ပါ
-sudo systemctl snapd.socket -now enable
Arch (plasma) မှာ install လုပ်ထားတဲ့ packet တွေပေါ်လာဖို့အတွက် restart လုပ်ရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါ။
ubuntu နှင့် derivatives များသည် KDE neon နှင့်အတူမှတ်ချက်များတွင်အထက်တွင်ထည့်ခဲ့သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်တူလိမ့်မည်ဟုငါထင်သည်။
Gnome ၌ Debian နှင့်ကြည့်လျှင်အလွန်ရုပ်ဆိုးပြီး GTK နှင့်ကောင်းစွာပေါင်းသင်းနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း Arch Plasma တွင်ပေါင်းစပ်။ အလွန်အရေးကြီးသည်မှာ estetics အပြင်ဘက်တွင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဟာက acestream-engine ကို install လုပ်တာလား။
မင်္ဂလာပါ၊ မဟုတ်ပါ၊ သင်ထည့်သွင်းမထားပါ၊ မှီခိုအားထားမှုအားလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် snap package များရှိပါကသင်တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အလုပ်လုပ်ပါသည်။
ဟယ် Alejandro, ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလားကြည့်ပါ
[txuber @ manjaro ~] $ sudo systemctl သည် snapd.socket ကိုဖွင့်နိုင်သည်
ယူနစ်ကို enable လုပ်ဖို့ပျက်ကွက်: ယူနစ်ဖိုင်ကို \_ xe2 \_ x80 \_ x93now.service မတည်ရှိပါဘူး။
Manjaro Manjaro XFCE Edition ကို (17.0.4) x64 အပေါ်
မင်္ဂလာပါ၊ Manjaro သည်၎င်းသည်သန့်ရှင်းသော Arch မဟုတ်သောကြောင့်အရာများသည်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။ ၎င်းကို enable လုပ်ထားနိုင်ပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ဘာလုပ်ရမှန်း install လုပ်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ace-player ကိုမတပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းကိုမည်သို့အလုပ်လုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
သင်တပ်ဆင်ထားသည့်အရာသည် acestream-launcher ဖြစ်ပါက link တစ်ခုကိုနှိပ်ပါက acestream သည်မည်သည့် application ကိုသင်ဖွင့်ချင်သည်ကိုမေးမြန်းပါလိမ့်မည်။ VLC နှင့်၎င်းပြောပါ၊ ၎င်းသည် ace-player ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ပေးမည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ ပထမ ဦး စွာသင်၏အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါမှတ်ချက်ပေးပါတယ် Debian9မှာ acestream snap package ကို gnome နဲ့ငါ install လုပ်ထားတယ်။ ငါလိုချင်သောarenavisión၌ရှိလျှင်၊ ငါ acestream link ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်အားရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာသည်။ ပထမတစ်ခုမှာ acestreamengine ဖြစ်သည်။ ဤကိုနှိပ်လျှင်၎င်းသည်ဘာမျှမလုပ်ဘဲဒုတိယတစ်ခုကအခြား application ကိုရွေးချယ်သည်။ ရွေးချယ်ရန်ရှိသော်လည်းသွင်းပြီးသော applications များမဖွင့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပင်မဖိုလ်ဒါကဖွင့်သောကြောင့် vlc ကိုမည်သို့ရွေးရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
Acestream-launcher ကလုံးဝအဆင်မပြေပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်အတိုင်းရှင်းပြသည့်အတိုင်း Snap package နှင့်သာပိုမိုကောင်းမွန်သည်။
ငါ snapd package ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ငါ့ကိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်:
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ အဲဒါကငါ windows မှာအသုံးပြုတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဒါကို linux ထဲမှာသုံးချင်တယ်
Chemabs နှင့် Alejandro ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ubuntu 17.10 ဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသော
snap ကိုရှာ acestream
မယုံနိုင်စရာကောင်းတာကမင်းတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပြီးသူတို့ကသူတို့ဖိုရမ်မှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကစပြီးပို့ပေးတာပါပဲ။ Ubuntu 2014 ကိုသာဖော်ပြနိူင်သည်။
Marco Barria ဟုသူကပြောသည်
sudo pacman -S snapd ပါ
snapd.socket ကို enable sudo systemctl
marco barria သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ။ ၀ င်းဒိုးများနှင့်ပြုသကဲ့သို့ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ဖြစ်စရာမလိုဘဲ ace stream ကိုထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းရှိပါသေးသည်